Ii-FAQs-iNkampani yeTyala ye-Nanchang Cemented Carbide Limited
Amaxabiso ethu axhomekeke ekutshintsheni ngokuxhomekeke kubonelelo kunye neminye imiba yemarike. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe vetshe.
Ewe, sifuna zonke ii-odolo zamazwe ngamazwe ukuba zibe ne-odolo encinci eqhubekayo. Ukuba ujonge ukuthengisa kwakhona kodwa ngexabiso elincinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu
Ewe, sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi aquka iziQinisekiso zoHlahlelo / zokuThobela; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle apho kuyimfuneko.
Kwiisampuli, ixesha lokukhokela limalunga neentsuku ezi-7. Ukuveliswa kobuninzi, ixesha lokukhokela liyi-20-30 iintsuku emva kokufumana intlawulo yediphozithi. Amaxesha okukhokela ayasebenza xa (1) sifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okukhokela akasebenzi kunye nomhla wakho obekiweyo, nceda ujonge iimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenjenjalo.
Siqinisekisa izixhobo zethu kunye nokusebenza. Ukuzinikela kwethu kukwaneliseka kwakho ngeemveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukuze wonke umntu aneliseke.
Ngaba uqinisekisa ukuhanjiswa kwemveliso ngokukhuselekileyo nokukhuselekileyo?
Ewe, sihlala sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle. Sikwasebenzisa ukupakishwa kweengozi ezikhethekileyo kwimpahla enobungozi kunye nabathumeli abaqinisekisiweyo abagcina izinto ezibandayo kwizinto ezinobushushu bobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zingafaka intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko zokuthumela ngenqanawa zixhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukufumana iimpahla. I-Express idla ngokuba yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa ikwabiza kakhulu. Ngokuhamba ngolwandle sesona sisombululo silungileyo kwiimali ezinkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso omthwalo sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe vetshe.
Izixhobo zeCarbide, ICarbide enesamente, Isixhobo seCarbide, IiMill zokuphela kweCarbide, Milling Cutter, Carbide Precision Tools,